မောငျ(စှယျစုံကမျြး): valentine day မှာ ချစ်​ သူ ကို လက်​ ​ဆောင်​ အ လန်း ​လေး ​တွေ လုပ်​ ​ပေး ဖို့. logomaker & graphics apk
valentine day မှာ ချစ်​ သူ ကို လက်​ ​ဆောင်​ အ လန်း ​လေး ​တွေ လုပ်​ ​ပေး ဖို့. logomaker & graphics apk
​ဆောလ်​ ဝဲ ​တွေ မ တင်​ တာ လည်း ကြာ ပြီ ဗျာ ခု ချစ်​ သူ များ​ ​နေ့ က လည်း နီး လာ ​တော့ ​ဘော်​ ဒါ ​တွေ ကို လက်​ ​ဆောင်​ ​ပေး ဖို့ စဉ်း စား မိ လို့ ဒီ post ​လေး ကို တင်​ လိုက်​ တာ ချစ် သူ များ ​နေ့ မှာ ချစ်​ သူ ကို ​ပျော်ွှင်​ သွား ​အောင်​ အ မှက်​ တ ရ လက်​​ဆောင်​ ​လေး လုပ်​ ​ပေး ရ ​အောင်​ အ ​ထွေ အ ထူး ​တော့ မ ဟုပ်​ ပါ ဘူး အား လုံး လည်း လုပ်​ ဖူး ကြ မယ်​ ထင်​ ပါ တယ်​ ဓာတ်​ ပုံ ​တွေ သီ ချင်း ​တွေ ဘ​လော့ ဆိုက်​ ​တွေ page ​တွေ ကို apk နဲ့ လုပ်​ ကြ ဘူး မယ်​ ထင်​ ပါ တယ်​ အဲ လို လုပ်​ တဲ့ ​နေ ရာ မှာ အ သွင်​ မတူ တဲ့ ဒီ ဇိုင်း တစ်​မျိုး နဲ့ apk logo ​လေး ​တွေ ထည့်​ နည်း ​လေး ပါ ရိုး ရိုး ပုံ ထည့်​ တာ ထက်​ စာ ရင်​ logo တံစိပ်​ ​လေး နဲ့ ဆို ​တော့ ပို ပြီး တစ်​ မျိုး ကြည့်​ လို့ ​ကောင်း သွား တာ ​ပေါ့ ​နော်​ ကဲ ​လေ ရှည်​ တာ လည်း များ သွား ပြီ စ လိုက်​ ကြ ရ ​အောင်​ အ ရင်​ ဆုံး logo ဖန်​ တီး ဖို့ အ တွက့်​ logo & graphics maker ​လေး လို အပ်​ ပါ မယ်​ playdtore မှာ​ ​တော့ ​ဒေါ် လာ နဲ့ ​ရောင်း ပါ တယ်​ အ ခု ကျွန်​​တော်​ ​ပေး တဲ့ လင့်​ က. Free ​ဒေါင်း နိုင်​ ပါ တယ်​ 53MB ရှိ ပြီး zip ဖိုင်​ နဲ့ ချုံ့​​ပေး ထား ပါ တယ်​ ​ဒေါင်း ပြီး ရင်​ zip ဖြည်​ apk ကို install လုပ်​ data ဖိုင်​ ကို android :obb: ထဲ မှာ pass ချ ​ပေး ​ပေါ့ ​နော်​ ဒီ​ ​လောက်​ ​တော့ အား လုံး တက်​ မယ်​ ထင်​ ပါ တယ်​ ​နော်​ လုပ်​ ပုံ လုပ်​ နည်း က ​တော့ ​အောက်​ မှာ screenshop ​တွေ တင်​ ​ပေး ထား တယ်​ play store မှာ ​လေ့ လာ ချင်​ တယ်​ ဆို ရင်​ ​တော့ ဒီ လင့်​ က ​နေ သွား ပါ
ပုံ​ ​လေး ​တွေ ကြည့်​ အုံး
ဒါ ​လေး ​တွေ က ​တော့ ကျွန်​ ​တော်​ လုပ်​ ထား တာ ပါ
Video ​လေး လည်း ကြည့်​ လိုက်​ ပါ အုံး ဗျာ
ဒီ ကို နှိပ် ၍ ​ဒေါင်း ပါ
ကဲ လို အပ်​ တာ ​လေး ​တွေ ​ဒေါင်း ပြီး ရင်​ ​တော့ က လိ ​ပေ ​တော့ ဗျာ photo ​တွေ ကို apk နဲ့ လုပ်​ တာ မ ရှိ ​သေး ရင်​ ​တော့ link ထုပ်​ ဖို့ အ ချိန် မ ရ လို့ play store က​​ ​နေ ပဲ ​ဒေါင်း လိုက်​ ပါ ​နော်​ ​နောက်​ အား တဲ့ တစ်​ ​နေ့ မှ့ ပဲ အစုံ ပြန်​ တင်​ ​ပေး ပါ့ မယ်​ အား လုံး valentine day မှာ ​ပျော်​ ရွှင်​ ကြ ပါ ​စေ ဗျာ
image 2app ကို ဒီ လင့်​ က ​နေ သွား လိုက်​ ပါ
play store သို့ သွား ရန်​
Author AN NO(သာယာဝတီသားလေး) at 6:23:00 PM
ဖုန်းကနေ မြန်မာကျားထိုးတာ ကစားချင်ရင် ဒီဆော့ဝဲလေးအဆင်ပြေတယ်( မြန်မာ့ကျား၊မြန်မာဆော့ဝဲ)
ကျားဆော့တာကတော့ မြန်မာတွေ အတော်များများ ဆော့ဖူးမှာပါ ဒီဆော့ဝဲက ကျားထိုးတာဝါသနာပါသူတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ် ခေါင်းစားရတယ်လေ စဉ်းစားပီမှ ...
Driver Pack Solution Professional 13 R-380 DVD ISO (4.36 Gb)
C Box ကရော Email ကပါ တောင်းဆိုထားကြတဲ့ ညီငယ်များနဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် ကျွန်တော်လဲ ကြိုးစားပြီး Driver Pack Solution Professional 13 ကို တ...
အရောင်နှင့် ဒီဇိုင်း ၈မျိုး ပြောင်းသုံးလို့ ရတဲ့ Sulfur Myanmar Keyboard နဲ့တခြားကီးဘုတ် ၃မျိုး
Download - Sulfur_s_Keyboard_www.zwmnna.com_.apk ========================================== Download - FrozenKeyboar.www.zwm...
မိုင်တိုင်76- ဖြူးမြို့ အလွန်က သရဲသားအမိအရမ်းခြောက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကား
ဒီကားကလည်း အောင်မြင်တဲ့ကားပါ မိုင်တိုင် 76 ဆိုတာ ဆင်ဆာထိလို့ကားပေါ်မှာပါလာတယ်လို့ပြောင်းလိုက်ရပေမယ့် လူတိုင်းဟာ ဒီကားကို မိုင်တိုင်7...
ImTOO Video Converter Ultimate 7.8.6 With Patch Full Version Size(35.3MB)
ဗီဒီယိုတွေကို Converter ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဆော့ဝဲလေးတစ်ခုပါ။ဒီဆော့ဝဲလေးက ဗွီဒီယို, အသံ, နှင့်ကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုအဖြစ်ပြော...
Titanic ( တိုက်တန်းနစ်) ဇာတ်ကား ပြန်ကြည့်ချင်သူများအတွက် HD Movieကြည့်နိုင်ပါပြီ
ဒီဇာတ်ကားလေးက 1997 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါ အော်စကာဆုပေါင်းများစွာရရှိပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ...
Android ဖုန်းအတွက် ဓာတ်ပုံတွေကို ပန်းဘောင်လှလှလေး ခတ်ချင်ရင်သုံးဖို့ 
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဖုန်းထဲကနေ ပုံတွေကို ဘောင်လှလှလေးတွေခတ်ချင်ရင် သုံးဖို့ ပါ ပန်းရောင်စုံတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘောင်လှလှလေးပါတာမို့ဖုန်းကသုံ...
ဖုန်းထဲက Game တွေကို ကွန်ပျုတာထဲမှာ ဆော့ချင်ရင် ဒီနည်းကို သုံး
ဒီဟာကတော့ ဖုန်းကဟာတွေ ကွန်ပျုတာမှာ ဆော့ချင်ရင် သုံးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ အကုန်လုံးတော့ မရဘူး တချို့ ဂိမ်းတွေ လုပ်မရတာရှိတယ် ။ မြန်မာ ...
Android ဖုန်းအတွက် ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်၊ ပဌန်းတရားတော်များ၊မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာ - apk
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် ၊ ပဌန်းတရားတော်များ၊မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာများကို apk တစ်ခု အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် ဖုန်...
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (37)
Android အလန်းဇယား Launcher (3)
Office Apk (2)
Phone Battery ပြဿနာ (10)
Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော (1)
Phone မှ Wifi ကို ခွဲသုံးနည်း (1)
Phone မှာ ရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (1)
Phone မျိုးအတွက် Firmware တင်နည်း (7)
Phone အင်တာနက်လိုင်း မြင့်နည်း (2)
Phone အတွက် Anti Virus (6)
Phone အတွက် Cleaner (9)
Phone အတွက် Photoshop ဆော့ဝဲ (33)
Phone အတွက် Player (10)
Phone အတွက် Video Editor (8)
Phone အတွက် မြန်မာလိုဆော့ဝဲ (10)
Phone အတွက် ဟာသ ဆော့ဝဲ (1)
Phone အတွက် အကောင်းဆုံး Camrea (1)
Phone အတွက်မြန်မာအဘိဓာန် (13)
Phone အတွက်မြန်မာဖောင့် (18)
Phone လေးလာရင်မြန်စေဖို့(8)
Photo Slideshow Maker Apk (4)
Photo ဒီဇိုင်းပြင်ချင်ရင် (1)
Useful Apk (19)
ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျုတာ Wifi ချိတ်နည်း (3)
အကြိုက်ဆုံး နိုင်ငံခြားက (4)
PDF Book Reader (1)
စာစီစာရိုက်နှင့် Miscrosoft Office (10)
လိပ်စာ Name ကဒ်လုပ်နည်း (1)
Photoshop နှင်ဒီဇိုင်းပညာများ (8)
Photoshopဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ (10)
အလန်းဇယား PhotoShop ဒီဇိုင်း (11)
Cyper Link Power Director (5)
Nero 8 ၏ အသုံးဝင်မှု (3)
Website နဲ့Blog နည်းပညာများ (25)
ဘလော့အလှဆင်နည်းနဲ့wedgets (68)